Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 11
Milaza ny Kristiana fa manana vatana, fanahy ary fanahy ny olona. Milaza ny Theosophist fa manana fitsipika fito ny olona. Amin'ny teny vitsivitsy dia inona ireo fitsipika fito ireo?
Ny theosophist dia mihevitra ny lehilahy amin'ny lafiny roa. Maty amin'ny iray izy dia tsy mety maty. Ny maha-olombelona mety maty dia mandrafitra fitsipika efatra miavaka. Voalohany, ny vatana ara-batana, izay amboarina avy amin'ny solosaina, ranoka, rivotra ary afo, izay akany amin'ny vatana ara-batana. Faharoa ny linga sharira, izay no endrika, na endrika noforonina ara-batana. Ity vatana endrika ity dia an'ny eterika, zavatra kely kokoa miova noho ny fiovana ara-batana tsy tapaka. Ny famolavolana na endrika vatana no fitsipika izay mamolavola ny sakafo tsy miova, ranon-javatra, gazy ary maivana nateraky ny vatana, ary miaro ny endriny mandritra ny fiainana. Fahatelo dia ny prana, na ny foto-kevitry ny fiainana. Ity fitsipiky ny fiainana ity dia mahatonga ny vatana endrika hivelatra sy hitombo, raha tsy izany dia mijanona ho mitovy foana ilay endrika. Amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny fiainana dia mihazona foana ny mofon'aina ara-batana. Ny fitsipiky ny fiainana dia midradradradra sy mihemotra ny taloha ary soloiny amin'ny endrika vaovao ny resaka. Amin'izany, ny vatana taloha dia esorina ary soloina zavatra ara-batana vaovao, ary ny zavamananaina dia aorina ho vatana ara-batana, ary ny vatana ara-batana dia omena endrika sy itambaran'ny endrika noforonina na vatana. Fahefatra, ny kama, ny foto-kevitry ny faniriana. Ny faniriana dia biby filanjana mikorontana ao anaty lehilahy. Io ny voajanahary voajanahary sy ny fironana biby ao amin'ny olombelona, ​​ary mampiasa sy manome torolalana ny fiainana sy ny endrik'ilay vatana vatana izy io. Ireo fitsipika efatra ireo dia anjaran'ny olona maty, misaraka, manapotika ary miverina amin'ny singa nakana azy.
Ny ampahany tsy mety maty ataon'ny olombelona dia intelo: Voalohany, manas, ny saina. Ny saina no foto-kevitra mampiavaka izay mahatonga ny olombelona ho olombelona. Ny saina no foto-kevitra ao amin'ny olombelona, ​​izay mandinika, mampisaraka, mampitaha, iza no mampiavaka azy ary mihevitra ny tenany ho tafasaraka amin'ny hafa. Mampiray amin'ny faniriana izy io ary mandritra ny fiainana ara-batana dia mitaky faniriana ho azy samirery. Misaintsaina, fa ny faniriana maniry; maniry ny hitrandrahana, fa mifanohitra amin'izay antony manosika azy. Avy amin'ny fifandraisana amin'ny saina miaraka amin'ny faniriana no tonga ny zavatra rehetra iainantsika eo amin'ny fiainana. Noho ny fifandraisan'ny saina sy ny faniriana dia manana ny maha-olona antsika isika. Amin'ny lafiny iray, faniriana, feno hatezerana, mahery setra; amin'ny lafiny iray, olona tia mandanjalanja ary milamina izay avy amin'Andriamanitra. Ny saina no foto-kevitra izay ivoahan'ny tarehin'ny natiora; havoana ny tendrombohitra, haorina ny lakandrano, ny firafitry ny lanitra manangana ary ny herin'ny natiora namboarina sy namporisika hanangana sivilizasiona. Ny fahenina, buddhi, dia ny fanahin'Andriamanitra, ny foto-kevitra izay mahafantatra sy mahatsapa ny tenany ao amin'ny hafa sy ny hafa ao anatiny. Izay no fitsipiky ny firahalahiana marina. Manao sorona ny tenany izy mba hahazoana manentana ambony kokoa ny natiora. Izy io no fiara izay iasan'ny fanahy madio. Fahafito, atma, ilay fanahy mihitsy, madio sy tsy misy loto. Ny zava-drehetra dia mampiray ao aminy ary io no fotokevitra iray mihanaka ao anaty sy momba ny zavatra rehetra. Ny saina, ny fanahy ary ny fanahy dia foto-kevitra tsy mety maty, fa ny vatana, ny endriny, ny fiainana ary ny faniriana dia mety maty.
Ny fizarazarana kristiana ny olona ho vatana, fanahy ary fanahy dia tsy mazava mihitsy. Raha ny vatana no dikan'ny endriny ara-batana, dia ahoana no hataonao ny fiainana misaraka, ny endrika maharitra sy ny biby ao amin'ny olona? Raha atao amin'ny fanahy ny zavatra izay mety ho very na ho voavonjy dia mitaky fanazavana hafa noho ny kristiana izany. Ny kristiana dia mampiasa fanahy sy fanahy ary sinonimarina ary toa tsy mahay mamaritra ny fanahy sy ny fanahy izy na tsy afaka maneho ny fahasamihafana eo amin'ny tsirairay. Ny Theosophist amin'ny alàlan'ny fanisanany impito dia manome fanazavana momba ny olona ny iray, izay azo antoka fa farafaharatsiny.
Amin'ny fiteny vitsivitsy dia azonao lazaina amiko ve izay mitranga amin'ny fahafatesana?
Ny fahafatesana dia midika ny fisarahana ny vatana ara-batana amin'ny endriny, na ny vatany. Rehefa manatona ny fahafatesana ny vatan'ny eterita dia misintona miala amin'ny tongotra mianakavy. Avy eo dia mametraka ny vatana ny saina na ego. Mampitsahatra ny aina ny fofonaina, miala amin'ny vatana, ary ny vatana endrika miakatra avy amin'ny tratrany ary mazàna mihodina amin'ny vava avy amin'ny vava. Voafandrika ny tadiny izay nampifandray ny vatany tamin'ny vatany ary tonga ny fahafatesana. Tsy afaka mamelona indray ny vatana vatana izy avy eo. Ny fitsipiky ny faniriana dia mety hihazona ny saina saro-pady mandritra ny fotoana kelikely, raha izany saina izany mandritra ny fiainana dia nieritreritra ny faniriany ho azy irery, ka io no ifandraisan'ny fanirian'ny biby mandra-pahatongan'ny fotoana hanavahana azy sy azy ireo, ampandehanana amin'ny toe-piainana faran'izay tsara na hetsika izay mifanaraka amin'ny eritreriny avo indrindra, izay nampiantrano azy mandritra ny vatana ara-batana. Ao no mijanona mandra-pahavitan'ny fitsaharany, ary miverina amin'ny fiainana eto an-tany izy hanohy ny asany hatramin'ny teboka nialany.
Ny ankamaroan'ny spiritista dia milaza fa amin'ny fisintahany dia miseho ny fanahin'ireo maty ary miresaka amin'ny namana. Milaza ny Theosophists fa tsy izany no izy; fa ny zavatra hita maso dia tsy ny fanahy fa ny akorany kosa, manidina na maniry ny vatana izay efa nolavin'ny fanahy. Iza marina izany?
Heverinay fa ny fitenin'ny teôsôsista dia marina kokoa, satria ny fiambenana izay mety hiresahana amin'ny fotoana iray dia fihetseham-po fotsiny avy amin'ny eritreritry ny entity mandritra ny fiainana ary ny resaka toy izany dia mihatra amin'ny zavatra ara-nofo, fa ny ampahany amin'Andriamanitra Hiresaka zavatra ara-panahy ny olona.
Raha mety ho gadra noho ny faniriany ny fanahin'ny olona, ​​nahoana no mety tsy hiseho izany fanahy izany ary nahoana no diso ny milaza fa tsy miseho sy miresaka amin'ny mpiara-miasa izy ireo?
Tsy mety ny hisian'ny fanahy maha olona mijery sy mifampiresaka amin'ny namana, saingy tsy azo atao ny manao izany, satria ny "sitters" dia tsy mahalala ny fandroahana ny voafonja vonjimaika ary satria tokony ho voaantso ny fisehoana toa izany. avy amin'ny iray izay mahalala ny fomba, na hafa noho ny faniriana fatratra ny iray izay miaina ary koa ny fanahin'olombelona tsy lavorary. Ny diso dia ny milaza fa ny fisehoana dia ny ain'ny nandao satria ny fanahy maha olona tsy mahay manavaka ny tenany sy ny faniriany dia mazàna amin'ny alàlan'ny metamorphose mitovy amin'ny an'ny lolo iray mba hahatsapan'izy ireo ny toe-javatra iainany. Na mandritra izany toe-javatra izany dia tsy mandeha mivezivezy toa ny voanio. Io fanahy olombelona izay afaka manana ny tenany hanavaka ny tenany amin'ny biby dia mandà ny hanao zavatra bebe kokoa amin'ilay biby izay mahatonga azy hampijaliana.
Ny antony hisehoan-javatra tsy fahita tahaka ny fisehoan'ny fanahy tsy mety maty dia ny hifandray amin'ny olona iray manatrika lohahevitra sasany, ohatra, ho fampahalalana momba ny maha-zava-dehibe ny ara-panahy na ny soatoavin'ny filozofika ho an'ny olona iray voakasik'izany. Ny fifandraisan'ny orinasa izay manao masquerade eo ambanin'ny lohatenin'ny olona nandao, resaka sy resabe momba ny zavatra tsy misy dikany ary misy vinavinaina mikasika ny raharaha sasany natolotry ny iray tamin'ireo sezafijaza. Raha nanameloka ny firesahana tamin-dresaka toy izany ny namanay izay nandao azy, nandritra ny fiainany teto an-tany, azontsika alaina toy ny namana ny alahelon'izy ireo, saingy na izany aza, tokony ho noterena isika hametraka azy ireo ao anaty fialokalofana tsy misy dikany, satria efa hita miharihary fa very ny sain'izy ireo. Toy izany ihany no nitranga tamin'ny zavaboary niseho. Tena nanjary very saina. Nefa ny faniriana resahintsika dia ny sisa, ary ny faniriana fotsiny dia taratry ny saina tsy nifandray tamin'io fisehoana io. Ireo fisehoana ireo dia mitsambikina avy amin'ny lohahevitra iray mankany amin'ny lohahevitra iray ary tsy misy antony ilazana azy io na tsy misy dikany ny eritreritra na ny heviny. Toa ny olona adala toa hita fa liana tampoka amin'ny lohahevitra iray, kanefa nanjavona tampoka ny lohahevitra, na ny fifandraisany amin'izy ireo, ary hitsambikina hafa. Rehefa mitsidika fialokalofana tsy misy saina ny olona iray dia hihaona amin'ny tranga tsy fahita firy izy. Ny vitsivitsy no hiresaka amin'ny resaka mahaliana maro, fa rehefa misy zavatra sasany ampidirina amin'ny lozabe dia lasa mahery setra. Raha mitohy ny resaka dia lava be ilay teboka tsy nijanonany ho olombelona. Toy izany koa amin'ny sponjy sy ny faniriana miseho amin'ny fotoana itovizany. Izy ireo dia mamerina ny fironana taloha sy ny filan'ny fiainana eto an-tany ary maneho ny tenany araka ireo filàna ireo, saingy tsy azo ihodivirana ilay resaka tsy misy dikany raha tsy ampiharina ny raharaha hafa izay tsy mifanaraka amin'ny faniriany manokana. Manana ny hafetsen'ilay biby izy ireo ary toy ny biby dia hilalao momba ny saha ary hiampita ny dian-dry zareo mba hialana amin'ilay manenjika azy ireo amin'ny fanontaniana mifandimby. Raha mitohy ny fihazana dia manao veloma an'ilay nanontany ilay tompon'andraikitra satria efa "tonga ny fotoany ary tsy maintsy mandeha izy" raha tsy izany dia hilaza izy fa tsy mahalala ny fomba hamaliana ny fanontaniana azy. Raha toa ka misy ny olona tsy lavorary dia tokony hiseho dia ho mivantana sy tsy misy dikany ao amin'ny fanambarana nataony ary ny zavatra nolazainy dia hanisy lanja ny olona niresaka. Ny toetoetran'ny fifandraisany amin'ny lafiny ara-pitondran-tena, ara-pitondran-tena na ara-panahy dia tsy zava-dehibe amin'ny fomba mahazatra, toy ny fahita matetika.
Raha ny fisehoana eo amin'ny sezansa dia ny kibay, ny spooks na ny faniriana vatana izay nofaritan'ny fanahin'olombelona aorian'ny fahafatesana, nahoana izy ireo no afaka mifampiresaka amin'ireo mpaka sary amin'ny foto-kevitra fantatry ny olona voakasika, ary nahoana? Moa ve io lohahevitra io ihany no haverina hatrany?
Raha toa ka misy ifandraisany amin'ny tsivalana na endrika faniriana mandritra ny fiainana an-tany miaraka amin'ireo anarana lazainy, dia fantatr'izy ireo ny momba ny lohahevitra sasany, toy ny an'ny lehilahy adala, saingy automatons ihany izy ireo, ary mamerimberina foana ilay malala eritreritra sy faniriana fiainana. Toy ny feon-tsary iray izy ireo no miteny izay nolazaina taminy, saingy tsy toy ny feon-tsary ny fanirian'izy ireo. Satria nifandray tamin'ny tany ny fanirian'izy ireo dia toy izany izy ireo ankehitriny, saingy tsy misy ferana noho ny fisian'ny saina. Ny valin-tenin'izy ireo dia aroso ary matetika no nateraky ny fanontaniana napetraka azy ireo, ary ireo no jerena ao an-tsain'ny mpanontany na dia mety tsy hahalala izany aza izy. Raha ny ohatra, dia mety hahita jiro taratra ny satroka hitafy na zavatra hafa izay mety tsy ho takatry ny saina. Rehefa ampahafantarina ny fanontaniana ny zavatra mbola tsy fantatra aloha dia heveriny ho mahafinaritra izany ary mazava ho azy fa mieritreritra izy fa io irery ihany no nahafantarana azy sy ny mpampahalalana azy, fa izany no hita taratra ao an-tsain'ny mpanontany na. raha tsy izany dia ny fahatsapana zava-mitranga ateraky ny faniriana endrika sy omena amin'ny fotoana rehetra navelan'ny fotoana.
Tsy azo lavina fa ny fanahy dia milaza ny marina indraindray ary manome toro-hevitra ihany koa izay mety hitondra soa ho an'ny rehetra. Ahoana no ahafahan'ilay teôsôpôtista, na ny hafa manohitra ny spiritisma, mandà na manazava ireo zava-misy ireo?
Tsy ilay teôsôsista na olon-kafa manaja ny fahamarinana hatrany no manandrana mandà ny zava-misy, na tsy mandà ny fahamarinana, na hanandrana manafina ny zava-misy, na hanazava izany. Ny ezaka avy amin'ny olona tia ny fahamarinana dia ny hahazoana ny zava-misy, fa tsy ny manafina azy ireo; fa ny fitiavany ny zava-misy dia tsy mitaky ny hanaiky azy ho marina ny fangatahan'ny olona tsy misaina, na ireo an'ny sponjy, na akorandriaka na singa, manongotra eo amin'ny seance ho sakaizan'ny namako maty. Henoiny ny fangatahana nataony, avy eo dia manaporofo ireo fitakiana fa marina na diso noho ny porofo efa nandroso. Manaporofo ny tenany foana ireo zava-misy ireo. Eo am-bavany ny olo-masina dia manaporofo ny tenany fa olo-masina, filozofa ho filozofa; ny resaka ataon'ireo olona tsy misaina dia manaporofo fa tsy mitombina ary ireo mpanaparitaka dia manaporofo ny tenany fa mpitsikilo. Tsy mino izahay fa manohitra ny zava-misy ara-panahy ny teôsôfisista, na dia mandà ny fitenenan'ireo ankamaroan'ny spiritualista aza izy ireo.
Ny ampahany voalohany amin'ny fanontaniana dia: ny "fanahy" ve indraindray milaza ny marina. Izy ireo dia indraindray; fa toy izany koa ny jiolahy mahery vaika indrindra momba an'io. Raha tsy nisy ohatra manokana momba ny fahamarinana voalazan'ny "fanahy" dia hazoto isika hilaza fa ny fahamarinana na fahamarinana nambaran'ny sasany izay lazain'ny olona sasany amin'ny fiantsoana ny hoe "fanahy" dia fomba mahazatra. Toy izany, ohatra, ho fanambarana iray fa ao anatin'ny herinandro dia hahazo taratasy avy amin'i Maria, na Jaona ianao, na hoe ho narary i Maria, na ho sitrana, na hisy soa aman-tsara hitranga, na ho faty ny namana, na fa hisy lozam-pifamoivoizana iray. Raha marina ny iray amin'ireto zavatra ireto dia hita fotsiny fa ny fisian'olona iray, na manana toetra ambony na ambany - dia afaka mahatsapa tsara kokoa noho ny olona iray, raha toa ka tonga nofo. Izany dia satria satria ny vatana tsirairay dia mahita an'io fiaramanidina io izay iasany. Raha miaina ao anaty vatana iray ny olona iray dia mahita zavatra ara-nofo amin'ny alàlan'ny fahatsapana ara-batana; ary ny fisehoan-javatra dia tsy hita afa-tsy amin'ny fotoana hisian'izy ireo, toy ny hatsiaka, na ny fahalavoana, na ny taratasy, na ny fihaonana tamina loza. Fa raha tsy voafetra amin'ny vatana ara-batana fotsiny ny olona iray ary mbola manana fahatsapana, ireo fihetseham-po ireo dia mihetsika eo amin'ny fiaramanidina eo akaikin'ny vatana, izay ny astral. Ny olona miasa amin'ny fiaramanidina astral dia afaka mahita fisehoan-javatra mitranga ao; ny fomba fijerin'ny fiaramanidina astral dia avy amin'ny toerana avo noho ny ara-batana. Noho izany, ohatra, ny fisainana na fikasana tsara ho an'ny olona hanoratra taratasy dia ho hitan'ny olona iray mahita izany fikasana na fisainana izany, na ny hatsiaka dia azon'izay ahitan'ny fahatokisana amin'ny alàlan'ny fahitana ny toetry ny astral an'ny olona izay hanana izany. Ny lozam-pifamoivoizana sasany dia mety efa vinavinaina ihany koa rehefa mihetsika ny antony nahatonga azy ireo. Ireo antony ireo dia miharihary ao an-tsaina na ny fihetsiky ny olona, ​​ary rehefa omena ny antony dia manaraka ny valiny. Ity misy ohatra: raha atsipy amin'ny rivotra ny vato iray dia mety hahafantatra mialoha ny fahalavoana alohan'ny hahitany ny tany. Araka ny hery izay nariana sy ny fiakaran'ny fiakarana, dia mety ho voavoitra mialoha ny lelan'ny fiaviany sy ny halavoana hitranga izany.
Ireo orinasam-piasa miasa amin'ny fiaramanidina astral dia mety hahita ny antony taorian'ny namoronana azy ireo ary mety haminavina ny fisehoan-javatra iray misy fahitsiana satria izy ireo dia afaka mahita eo amin'ny astral izay hitranga amin'ny vatana. Saingy ny mpamono olona dia afaka mahita ny fiakaran'ny vato ary milaza mialoha ny fiaviany ho tena olo-masina na filozofa. Ireto ny zavatra ara-nofo. Ny torohevitra momba ny fomba hisorohana ny loza iray dia tsy manaporofo fa omen'ny fanahy tsy mety maty izany. Mety hanoro hevitra iray amin'ny lozam-pifamoivoizana marina ny olo-malaza iray. Na mety hanoro hevitra iray mijoro amin'ny lalana midina ianao ary hisorohana ny ratra. Dia mety ho marary saina. Mety hanontaniana ny fomba hanomezana torohevitra toy izany ny spook, raha tsy misy fotony ny spook. Hitanay fa ny sponjy iray dia tsy misy dikany ao anatin'io dikany io fa ny olona tsy manana fanantenana tsy misy fanantenana dia tsy misy saina. Na dia manary fahalalana momba ny maha izy azy aza izy dia misy fisintonana kely izay ampidirina amin'ny faniriana, ary mijanona amin'ny faniriana ihany. Izy io dia taratry ny saina izay manome toe-tsaina sasantsasany amin'ny toe-javatra sasany, saingy tsy maintsy hadino fa na dia very ny saina fa mijanona ny biby. Tsy namoy ny fahalotoany sy ny hafetsen'ilay biby ilay biby miaraka amin'ny fihetseham-po navelan'ny saina mamela azy hanaraka, amin'ny toe-javatra sasany, toy ny efa nampidirina, ny hetsika mihetsika ao amin'ny sehatra izay iasany. Ireo zava-misy dia avy eo dia hita taratra ao aminy fa ny sary dia mety ho taratry ny fitaratra. Rehefa hita taratra ao amin'ny faniriana ny hetsika iray ary io sary io dia mifandray na mifandraika amin'ny iray amin'ireo sezafiandrianana eo amin'ny sezana, ny sponjy na akorany dia mamaly izany sary mieritreritra izany ary manandrana mamoaka ny eritreritra na ny fahatsapana ho piano dia hiantso mafy na hamaly ilay olona niasa. Raha misy zavatra tsy azo sitranina ao amin'ny seance iray, dia very izany sary izany ao an-tsainy ary ity sary ity dia tahiry ho fahatsiarovana taloha. Matetika no hita na hita taratra ilay filana vatana na spook ilay sary. Avy eo izy dia mamaly ny sary amin'ny alàlan'ny filazalazana ny sitter fa amin'izao fotoana izao dia very ny lahatsoratra manan-danja toy izany, na raha nahita an'io lahatsoratra io, tany amin'ny toerana nametrahany azy, na hoe very. Ireo toe-javatra ireo ny fotoana itaterana ny zava-misy sy ny torohevitra omena, izay manaporofo fa marina. Amin'ny lafiny iray, raha omena ny zava-misy iray, dia diso lainga ny zato, ary raha marina ny torohevitra, dia mahadiso hevitra tampoka izany. Noho izany dia milaza izahay fa fandaniam-potoana sy manaratsy olona ny manontany sy manaraka ny torohevitry ny olona lasa. Fantatra fa ny olona rehetra mandoka ny fahalemen'ny hafa, manao poka, na filokana, na vinavina eo an-tsena, dia avelany mahazo vola kely ireo traboina nanjo azy, na raha handoka vola ilay lasibatra amin'ny fahaizany izy. amin'ny fanombatombanana. Natao izany mba hampirisihana ny lasibatra hanohy ny risika, fa amin'ny farany dia niteraka fahombiazana sy fahapotehana tanteraka izany. Toy izany koa ny zava-nisy tamin'ny mpamaky mozika sy spra chasers ary mpihaza. Ny zava-misy kely izay hitany fa tena mandrisika azy ireo hanohy ny fanaon'izy ireo mandra-pahatongan'izany, dia tahaka ny mpitsikilo ilay izy. Ny mpitsikilo dia mifehy ary mety handinika tanteraka ilay lasibatra ary avy eo aorian'ny tsy fahombiazana sy fahapotehana. Ny antontan'isa momba ny haino aman-jery sy ny trangan-javatra dia manaporofo izany fanambarana izany.